Fampitahana ny lalotra hydrogel sy ny lalotra vita amin'ny nentim-paharazana
Anisan'ireo vokatra vita amin'ny plastika ny patch, ny substrates vita amin'ny fingotra voajanahary no tena ampiasaina any Shina. Amin'ny maha fitaovana vaovao azy dia lasa malaza any Japon, Sina, Korea atsimo ary firenena hafa ny substrates hydrogel nanomboka ny iray ka hatramin'ny roa taona lasa. Anaran'ny vokatra lozisialy plastika patch patch hydrogel plaster ...
Ny tsy fitoviana eo amin'ny fitafiana hydrogel sy hidrokloloid
Andao hiresaka momba ny fitafiana hidrokololoid. Ny singa mahazatra indrindra mandray ny rano dia ny carboxymethyl cellulose (CMC raha fohy). Ny hydrocolloid amin'izao fotoana izao dia manana membrane semi-permeable ety ivelany, izay afaka manamboatra ny ratra amin'ny rivotra, tsy misy rano ary porofon-bakteria, saingy afaka mamela ny rivotra sy ny vavahady ...
Fampidirana ny vokatry moisturizing ny hydrogel
1. Fomba fanamainana mando misy fomba telo hahatsapanao ny fiasa mahamando: 1. Mamorona rafitra mihidy eo amin'ny hoditry ny hoditra hisorohana ny hamandoana amin'ny hoditra tsy ho etona amin'ny rivotra; 2. Asio «moisturizer» ny hoditra mba tsy hiparitaka sy tsy hahavery rano ny hoditra; 3. Modern bi ...
Fitandremana ny fitsaboana ratra
Ny dingana voalohany dia tsy maintsy mifehy ny aretina. Ny fomba dia ny manaparitaka ny tavy nekrotika amin'ny ratra. Ny debridement no fomba tsara indrindra sy haingana indrindra hampihenana ny exudate, hanafoanana ny fofona ary hifehezana ny fivontosana. Any Eropa sy Etazonia, lafo be ny vidin'ny fandidiana debridement. Su ...